Paul Pogba iyo Amad Diallo oo faraaha keenay taageerada u hayaan Falastiin - Bulsho News
Stadium Muqdisho: Garoonkan oo lagu qabanayo tartan kubadda cagta ah
Paul Pogba iyo Amad Diallo oo faraaha keenay taageerada u hayaan Falastiin
19 Maajo 2021
Paul Pogba iyo Amad Diallo oo sitay calanka Falastiin
“Waxaan leenahay ciyaartooy meelo kala duwan kasoo kala jeedo oo leh dhaqamo kala duwan, dalal kala duwan kasoo kala jeedo, waa in lagu tixgeliyo ra’yigooda” ayuu yiri maamulaha kooxda Manchester.
Wuxuu intaas ku daray, “Haddii ciyaartoydeyda ay ka fakarayaan wax ka baxsan ciyaaraha, waa arrin wanaagsan”
Waxaa tallaabadan soo dhaweeyay safiirka Falastiin u fadhiya magaalada London.
Wuxuu uga mahad celiyay ciyaartoyda taageerada ay u muujiyeen Falastiin.
Dhawaan ayay aheyd markii ciyaartooy ka dheela kooxaha Arsenal iyo Ajax ay dhaleeceyn kala kulmeen tageerayaashooda, kadib markii ay taageereen Falastiin.
Ciyaartoydaas waxaa kamid ahaa Maxmed El-Niny oo u dheela Arsenal, saddex ciyaartooy oo kasoo jeedo Morocco oo u dheela kooxda Ajax, ee kala ah Naseer Mazraoui, Usama Al Idrissi iyo Zakariya Labeyd.
Sidoo kale habeenkii Axadda aheyd Wesley Fofana iyo Hamza Choudhury oo u dheela kooxda Leicester, ayaa la arkayay iyagoo sita calanka Falastiin, si ay taageero ugu muujiyaan shacabka Falastiiniyiinta.
Madaxa xafiiska diblomaasiyadda Falastiin ee London, ayaa warqad mahad celin ah u qoray labo ciyaaryahan oo calanka Falastiin ka dhex lulay garoon kubadda cagta ah, iyagoo u dabaal degayay guushii FA cub-ka ay ka gaareen kooxda Leicester ee ka dhisan Ingiriiska.
Husam Zomlot ayaa sheegay in taageerada ay muujiyeen Wesley Fofana iyo Hamza Choudhury, ay ahayd mid aad loogaga diirsadey dhulka Falastiin oo dhan.
London waxaa habeenkii Axadda ka dhacday ciyaar xiiso leh oo lagu soo gaba gabeynayay koobka FA cup-ka. Ciyaarta waxaa ku badiyey 1-0 Liecester oo markii ugu horeysay qaaday koobka FA-ga.
Diego Maradona: Maxaa la isugu haystaa maydka xidiggii kubadda cagta?
Laacibiinta caalamka: Tobanka ciyaartooy ee ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan guud ahaan dunida
Lionel Messi: Ma si dhab ah ayuu u dhammaaday waayihii weeraryahanka reer Argentine ee Barcelona?